Siyaasaddu Cadaawad Malaha, Kii Shalay Kuriday Ayaa Maanta Ku Dhisi Kara ,!!.. – somalilandtoday.com
Axsaab badan oo Mucaarid iyo Muxaafid-ba leh ayaa luuqa isoo dhigay fariimo daba socda maqaal aan ka qoray Maxamuud Xaashi, waxayna xasuus iigu celinayeen waayihii uu Wasiirka Madaxtooyada aha iyo wixii na kala gaadhay, qaar kale waxay liqi wayeen maxa Waddani iyo tageerayaashiisa ka galay siyaasadda Xisbiga KULMIYE iyo cidda Indhaha loo camudeeyay, raggan ay u doodayaan miyaanay ahayn kuwii ay isa seegeen ee Xisbiga WADDANI riday . ?? “Jawaab waafiya”..
Tusaale qudha ayaan idinsiinaya oo nool. Wasiirkii Maaliyada Xukuumaddii Daahir Rayaale, Ambassador Cawil Cali Ducaale waxaynu mooodi jirnay amma Dad badani u haysteen haddii mar-uun uu Siilaanyo Xukunka qabto in Cawil waxa ku dhaca la yaabi doono. Siilaanyo agtiisa ayuu fadhiisiyay Cawil Cali Ducaale Xil iyo Mushaharana waabu ugu daray oo Wadahadaladi Somaliland iyo Soomaaliya khabiir u qaabilsan ayuu aha. Dr. Maxamed Cabdi Gaboose markii Ururkii SAHAN soo bixiwaayay 2002-dii, doorashadii Madaxtooyada ee 2003-gii wuxuu tageeray oo ciidankiisi tageerayaashisi iyo degaanadi looga codeeyayba uu ku shubay Xisbigii UDUB iyo Murashaxiisi Daahir Rayaale Kaahin. Wuu la dagay Axmed Siilaanyo waanu ka shaqeeyay riditaankiisi, misana amarka Illaahay doorashadii kuxigtay 7-sanno kadib 2010-kii ayuu la shaqeeyay Siilaanyo markii guushi timina Wasiirkii ugu waynaa Xukuumadda oo ah Wasiirka arrimaha gudaha ayuu Axmed Siilaanyo u magacaabay Dr. Gaboose. Waa isla laba dhacdo oo isku xigay.
Eng: Maxamed Xaashi Cilmi wuxuu khayriyada Hargaysa kaga khudbadeyay “Sidii SNM ay u shaqayn jirtay Xisbiga UDUB ayaa u shaqaynaaya ee u codeeya ” Iyadoo saxiibki Siilaanyo sharaxanyahay ayuu ka shaqeeyay sidu kursiga u waasiin laha waanu riday Siilaanyo 2003-gii . Misana doorashadii ku xigtay ayuu la shaqeeyay markii Axmed Siilaanyo guushi helay wuxuu Eng Maxamed Xaashi Cilmi u magacaabay Wasiirkiisi Maaliyada . Eesh qiyaasak siyaasaddu colaad maleh Hebel ayaa Shalay i xumeeyay maleh ileen lacag umaad dhiibane Maanta ayuu kula shaqaynayaa ka faaiidayso . Warku wuu Boowe ku dhanyahay Shalay iska ilow Maanta la qabso .